Tsarovy ny zavatra rehetra hain'ny mino. - Gail Devers - Pedia Quotes
Tsarovy ny zavatra rehetra hain'ny mino. - Gail Devers
Ny finoana ny tena dia midika hoe fahatokisan-tena. Zava-dehibe ny fananana finoana eo tenanao ary ny asa ataonao dia avy eo afaka mitsangana hahita fahombiazana sy sambatra ianao. Ny fitokisan-tena no lehibe lehibe indrindra hahomby. Rehefa mino ny tenanao ianao dia afaka miala amin'ny tahotra ny tsy fahombiazana. Raha tsy ampy ny finoana sy ny finoana ianao dia tsy ho mihetsika, ary noho izany, dia tsy ho ampy guts ianao hitsangana ho an'ny tenanao.
Ny olona tsy mino ny tenany dia tsy hanana fahatokisana mihitsy amin'ny fanaovana zavatra, ary noho izany, mirona hametraka ambany ny barany izy ireo. Ny olona tsy mino ny tenany dia hanana ny lanjany ny tenany amin'ny farany ary noho izany dia lasa tsy mino ny tenany. Noho izany, tsy afa-mihazakazaka araka izay vitany izy ireo ary mandroso.
Tsy misy zavatra antsoina hoe 'tsy azo atao'. Ny hany ilainao dia ny mino ny tenanao, ary azonao antoka fa hahatratra ny zava-drehetra eritreritrao ianao! Zava-dehibe tokoa ny fanekena-tena. Rehefa afaka mahita ny soatoavinao ianao dia afaka manam-pinoana amin'ny tenanao.
Ny olona iray izay manaiky ny hoe mandeha amin'ny lalana tsara izy dia hahita fomba hahatongavana amin'ny tanjona. Mifanohitra amin'izay aza, raha toa ianao ka tsy misalasala momba ny tenanao, hitoetra ao anaty fahasahiranana ianao na mizotra amin'ny làlana marina.
Minoa Quirational inspirational
Minoa Quotation Motivational Quotes
Minoa Quotes sary
Quote amin'ny Andro
Tohizo ny nofinofinao. Ilaina ny hahatanteraka na inona na inona mitaky finoana sy finoana ny tenanao, fahitana, asa mafy, fahavononana ary fanoloran-tena. - Gail Devers
Ny nofy dia afaka mitondra anao mankany amin'ny fahatrarana. Ny olona izay tsy nanonofy akory dia tsy ho afaka na aiza na aiza.